Porn-ED သွေးဆောင်မှု ED: (သံသယဝင်သူများအတွက်) လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထား - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
Porn-ED သည် ED သည်မကြာသေးမီကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းတည်ရှိလာပုံနှင့်၎င်းကိုကုသရန်အဘယ်အရာလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းစူးစမ်းသောခိုင်မာသည့်သိပ္ပံနည်းကျစာပေများယခုတွင်ရှိလာသည်။
အနိမ့်လိင်စိတ်: 2010 ကတည်းကငယ်ရွယ်အထီးလိင်အကဲဖြတ်လေ့လာရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏သမိုင်းဝင်အဆင့်အသစ်တစ်ခုဘေး၏တုန်လှုပ်နှုန်းထားများသတင်းပို့ပါ။ ဒီ Lay ဆောင်းပါးထဲမှာမှတ်တမ်းတင် နှင့်ဤအတွက်7အမေရိကန်ရေတပ်ပူးတွဲစာရေးဆရာများနှင့်အတူစာပေပြန်လည်သုံးသပ်။ အနိမ့်လိင်စိတ် (hypo-လိင်) အတွက်နှုန်းထားများ 14% ကနေ 33% အထိစဉ်ကဤမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများအတွက် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်း% 16 မှ 37 ကနေအထိ။ မြင့်မားပ္ပံယောက်ျား 25 နှင့်အောက်တွင်ပါဝင်သောလေ့လာမှုများအနေဖြင့်ရှိနေစဉ်အောက်ပိုင်းပ္ပံ, ဆယ်ကျော်သက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေနဲ့ယောက်ျား 40 မှစ. ထိုအရွယ်အောက်ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။
အခမဲ့ streaming porn ၏ထွန်းမတိုင်မီက Cross-Section လေ့လာမှုများနှင့် Meta-analysis သည်တသမတ်တည်း2အောက်မှာလူ 5-40% ၏ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါကနီးပါးကနောက်ဆုံး 1000 နှစ်များတွင်ငယ်ရွယ်နုပျို ED နှုန်းထားများအတွက်တစ်ဦး 15% တိုးလာပါတယ်။ အဘယ်အရာကို variable ကိုဒီနက္ခတ္တဗေဒမြင့်တက်မှုအတွက်အကောင့်နိုင်ကြောင်းပြီးခဲ့သည့် 15 နှစ်များတွင်ပြောင်းလဲသွားပြီလော သာအင်တာနက်ညစ်ညမ်း။ အဆိုပါကျယ်ပြန့်မကြာသေးမီပြန်လည်သုံးသပ် "အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များကပူးတွဲရေးသားအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း,"နုပျို ED ၌ဤကြီးမားတဲ့မြင့်တက်မှုအတွက်အပေါငျးတို့သညျအခွားအကြံပြုအကြောင်းတရားများအမှာစကားပြောကြား။ ဒါဟာအစညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏တည်ရှိမှု "ငြင်းဆန်" ကိုမလုပ်ပဲသောသုတေသနအပေါ်ကြာပါသည်။
၎င်း၏စာရေးဆရာများကြောင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရဲ့ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်သတ္တိ (အဆမဲ့အသစ်အဆန်း, စတာတွေကပိုလွန်ကဲပစ္စည်း, ဗွီဒီယို format နဲ့, ရန်လွယ်ကူတင်းမာမှုများအတွက်အလားအလာ) အလွယ်တကူအစစ်အမှန်-life ပြောင်းလဲမညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုရှုထောင့်မှလိင်စိတ်နိုးထအခြေအနေဖို့လုံလောက်တဲ့အစွမ်းထက်ဖြစ်မည်အကြောင်းသတိပေးခဲ့သည် တပ်မက်လိုချင်သောအဖက်များနှင့်အတူလိင်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အ arousal ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်တွေ့ဆုံအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်မပြုစေခြင်းငှါဤကဲ့သို့သောကြောင်းမိတ်ဖက်။
2011, အများ၏ဦးခေါင်း၌ Andrology နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာအီတလီအသငျး (Siam) porn-သွေးဆောင် ED ရှိကွောငျးသတိပေးခဲ့သည်။ Siam, အီတလီ၏အကြီးဆုံး urology အဖွဲ့အစည်းစစ်တမ်းတစ်ခုကနေတစ်ဆင့်ဒီထွန်းသစ်စဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြေရှင်းရန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ၏ပထမဦးဆုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သမ္မတဆေးခန်းယောက်ျားတွေ 2-3 လကြာ porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Foresta ရဲ့ကြေညာချက်၏ထိုအချိန်ကကျနော်တို့အကြောင်းကို4နှစ်ပေါင်း porn-သွေးဆောင် ED နှင့် ပတ်သက်. ဆောင်းပါးများရေးသားခဲ့သညျ။
2011 ကတည်းက 100 သည်အခြားကျွမ်းကျင်သူများထက်ပို bandwagon အပေါ်ခုန်တက်ခဲ့ကြ။ Urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS နှင့်အခြားသူများယခုဝန်ခံ (နှင့်အများအပြားအောင်မြင်စွာကုသကြပါပြီ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED နှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံး။ 2016 ခုနှစ်, ဘယ်လဂျီယံသုတေသီများသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ကြောင်းပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုမတရားသောနှင့်ဆက်စပ်ပေမယ့်အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အောက်ပိုင်း erectile function ကိုခံခဲ့ရသည်။
အထက်ဖော်ပြပါအမေရိကန်ရေတပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးကတည်းကထွက်လာကြမှအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့စာတမ်းများတစ်ခုမှာအကြီးဆုံးဥရောပ sexology အဖွဲ့အစည်းကရောဘတ် Porto, MD ၏ပြင်သစ်စိတ်ရောဂါနှင့်သမ္မတအနားမှာရှိ၏။ ဆရာဝန် Porto မှတ်ချက်ပြု ဆိုက်ဘာ-ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဖြင့်လိုက်ပါသွားကြောင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, "," ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့မဟုတ် coital anejaculation အချို့အမျိုးအစားများ၏ etiology အတွက်အခန်းကဏ္ဍမှမြင်ကြလျက်ရှိသည် "ထိုယေဘုယျအားဖြင့်ညစ်ညမ်းစွဲယနေ့ဆက်စပ်ယင်း၏အလွန်အကျွံနှင့် Pre-ထင်ပေါ်ကျော်ကြားပုံစံ, လွန်းမကြာခဏကသွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏လက်တွေ့အကဲဖြတ်အတွက်သတိမမူဖြစ်ပါတယ်။ "တွင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ
သူသည်ဤအလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူ 35 လူနာအပေါ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ "နားမလည်" သူတို့ masturbatory အလေ့အထများမှကုသမှုအပြီးတွင်သူတို့ထဲက 19 အတွေ့အကြုံရှိတိုးတက်မှုများ။ ဒေါက်တာ Porto အဆိုအရ "ဟု The အလုပ်မဖြစ် regressed နှင့်ဤလူနာကျေနပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပျော်မွေ့နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ " စိတ်ဝင်စားစရာစွဲကြသည်မဟုတ်သူကိုပင် porn အသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်း-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အန္တရာယ်မှာရှိနိုင်ပါသည်။ မိမိအလူနာတစ်ဦးတည်းသာလေးပုံတပုံစွဲအဖြစ်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ဆီးရောဂါပါရဂူလည်းတက်စကားပြောနေကြသည်။ 2016 ခုနှစ်တွင်ဒေါက်တာ Tarek Pacha "ခွင့်, အမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအစည်းအရုံးရဲ့နှစ်စဉ် conference မှာသူ၏အပေါင်းအဘော်ကဆရာဝန်များတစ်ဦးတင်ဆက်မှုကိုအပ်ညစ်ညမ်းသွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (PIED): အဆိုပါနယ်ပယ်, သိပ္ပံနှင့်ကုသမှုကိုနားလည်ခြင်း။ "ထိုအခါ 2017 အတွက်ရေတပ်ဆရာဝန်များကအမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအစည်းအရုံးရဲ့နှစ်စဉ် conference မှာတင်ဆက် သတိပေးကြောင်း အမှန်တကယ်ကမ္ဘာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှညစ်ညမ်းပိုနှစ်သက်သူကိုလူပျိုတို့, သူတို့ကိုယ်သူတို့ထောင်ချောက်အတွင်းဖမ်းမိအခွင့်အလမ်းကိုယ်နှိုက်ကတင်ဆက်သည့်အခါအခြားလူများနှင့်အတူလိင်ဖျော်ဖြေဖို့မတတ်နိုင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Naysayers ကျွန်ုပ်တို့ကတည်ရှိပြောနိုင်မတိုင်မီ porn-related ED ၏တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုဖို့ပိုလေ့လာမှုများလိုအပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့နုပျိုကျန်းမာတဲ့လူတို့သညျတစျခုအုပ်စုတစ်စု 10 နှစ်ပေါင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုသာ sensation မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမှတဆင့်အကဲဖြတ် erectile function ကို (အဘယ်သူမျှမ porn) နှင့်အတူမထားတဲ့အတွက်, အဘယ်သူမျှမသုတေသီစံလေ့လာနိုငျကွောငျးနာကျင်စွာသိသာင် ။
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု porn-သွေးဆောင် (PIED) သို့မဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးရှိမရှိအတည်ပြုပေးရန်တစ်ဦးတည်းသာလက်တွေ့ကျတဲ့လမ်းရှိပါတယ်: မျိုးစုံကိစ္စတွင်လေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဖြစ်အစီရင်ခံအဖြစ်, အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုတိုးချဲ့ကာလအဘို့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ဝေဒနာသည်သာမန် erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာ regains လျှင်ကြည့်ပါ အထက်။ ဂယ်ရီ Wilson ကဖွငျ့ဤ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူကိုကြည့်ပါ: ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (2016) ဖော်ပြမှနာတာရှည်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုပပျောက်။
ဤသည်ကိုတွေ့မြင်-porn ပပျောက်-and စမ်းသပ်မှုဖြစ်ခြင်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ယောက်ျားတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏အားဖြင့်အလွတ်သဘောကောက်ယူ ကမ္ဘာတစ်လွှားကအင်တာနက်နာလန်ထူဖိုရမ်များထဲမှာ - နှင့်အတူ ယခုသတင်းပေးပို့ရလဒ်များကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏။ မည်သို့ပင်သင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါစေ အချို့သောသတင်းစာပညာအကောင့်အသစ်များ၏, မျိုးစုံလေ့လာမှုများ link တစ်ခုထုတ်ဖေါ် porn အသုံးပြုမှုအကြား နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများ, ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုများနှင့်လျှော့ချဦးနှောက်ကို Activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုရန်။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှု - "လူပျိုတို့နှင့်တစ်ခုတည်း variable ကို၏ဖယ်ရှားရေးအတွက် unexplained နာတာရှည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု"
ဒါကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစမ်းသပ်မှု porn-သွေးဆောင် ED ဆန်းစစ်, ခိုင်လုံသော reproducible နှင့်ပင်ကိုယ်မူလဖြစ်ပါတယ်။
ထောင်နှင့်ချီသောအခြားကျန်းမာသည့်လူငယ်များ (အသက် ၁၆-၃၅)၊ တူညီသောအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း။
ဘာသာရပ်များ၊ ဘာသာရေးယုံကြည်မှုများ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများ၊ မွေးရပ်နိုင်ငံ၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးအခြေအနေများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။
ဤရွေ့ကားလူပျိုတို့ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်မဟုတ်နိုင်ပြီး, တဖြည်းဖြည်း, အခြို့မရှိတော့ porn အသုံးပြုမှုနဲ့စိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
အတော်များများကမျိုးစုံကျန်းမာရေးယောဂီမြင်ကြပြီအပေါင်းတို့နှင့်အဘယ်သူမျှမရလဒ်များကိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ copulatory ED ကုသပေးဖို့ချဉ်းကပ်၏နံပါတ်ကြိုးစားခဲ့ပြီ။
သူတို့က porn အသုံးပြုမှုကိုမယုံနိုငျကွောငျးအများစုမှာပြည်နယ်ပညာရေးစေပြီနိုင်ဘူး။ တချို့ကကြိုတင် porn မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတက်ပေးခြင်းဟာသူတို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုစတင်ရန်အလွန်သံသယဖြစ်ကြသည်။
သူတို့ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ masturbate ဖို့ကြိုးစားနေစဉ်အပြည့်အဝစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်ပျက်ကွက်အဖြစ်၎င်းတို့၏ပညာရေး၏အကြောင်းရင်း (performance ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မဟုတ်ခဲ့ငါ၏အ ED porn-related လျှင်အဘယ်သို့ငါသိနိုင်မည်လဲ? (စမ်းသပ်ခြင်း)
အားလုံး porn အသုံးပြုမှုပပျောက်။
အများစုမှာ (သို့သော်အားလုံးမဟုတ်) ဖယ်ရှားခြင်း, သို့မဟုတ်အကြီးအကျယ်လျှော့ချဖို့, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ကြိမ်နှုန်း။
သူတို့ porn အသုံးပြုမှု / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း, ထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှု, မတရားသော, လိင်စိတ်၏ပြီးပြည့်စုံသောဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်လက္ခဏာတွေ၏အသွင်အပြင်များအတွက်အလားတူအချိန်-frame ကိုရပ်တန့်သည့်အခါနီးပါးတိုင်းဘာသာရပ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူကြယ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ 2006-2010 အများဆုံးသာလိုအပ် 2-3 လအတွင်းအကြား, ဒါပေမယ့် Recovery ၏အရှည်တဖြည်းဖြည်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတိုးပွားလာပြီ recovery ကြိမ်ခြားနားသည်။ တချို့ကယခု 6-12 လအတွင်းသို့မဟုတ်ရှည်ထားဖို့လိုပါမယ်။ "။ ပြဿနာ" ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများအလွန်တိကျတဲ့သတ်မှတ်ချက်နှင့်မစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပြုအောက်ပါအတိုင်းပြန်လည်နာလန်ထူ၏ခါတိုင်းလိုပုံစံဖြစ်ပါသည်:
ဘာသာရပ်များထိုကဲ့သို့သောမူမမှန်အိပ်ပျော်နေသောမတရားသော, စိုးရိမ်စိတ်, lethargy, စိတ်ကျရောဂါ, ဦးနှောက်မြူ, အညစ်, လှုံ့ဆော်မှု, ကိုက်ခဲခြင်း, ဝဒေနာ, စတာတွေကြောင့်အပြိုင်မူးယစ်ဆေး / အရက်ဆုတ်ခွာကွဲပြားဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ, တွေ့ကြုံခံစား
အနိမ့်လိင်စိတ်, လိင်အင်္ဂါအာရုံခံစားမှုသို့မဟုတ်အရွယ်အစားရိပ်မိအပြောင်းအလဲများကို: 1-2 ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာအများဆုံးဘာသာရပ်များ "ဟုအဆိုပါ flatline" ဟုခေါ်ဘာကိုခံစားရ။
သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်က၎င်း၏ချိန်ခွင်လျှာ regains မတိုင်မီ Hyper-arousal ၏ flatline စသည်တို့ကိုနှေးကွေးစွာ abates နှင့်လိင်စိတ်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွါး, နံနက်စိုက်ထူခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်စိုက်ထူမကြာခဏတက်ပြအစစ်အမှန်မိတ်ဖက်တိုးဖို့ဆွဲဆောင်မှုပြင်းစွာတိုက်အဆန်းမဟုတ်ပါ။
လူတို့သညျ regimen ကပ်ပါလျှင်, အားလုံးနီးပါး erectile ကျန်းမာရေးပြန်လည်။
အပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူ၏အရှည်လပေါင်းများစွာမှရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ခြားနားသည်။ အများစုမှာ 2-9 လအတွင်းဖြစ်ကြသည်နာတာရှည်အဘို့အနှစ်ရှည်လများ ED အထိ။
unexplained ED နှင့်အတူငယ်ရွယ်ကျန်းမာတဲ့ယောက်ျားနှင့် ဘုံထဲမှာတစ်ဦးတည်းသာ variable ကို (အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု), အဘယ်သူမျှမအောင်မြင်မှုနှင့်အတူမျိုးစုံ regimen နှင့်ကုသကြိုးစား။ အဆိုပါဘာသာရပ်များ သူတို့ဘုံရှိတ variable ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ လုနီးပါးအပေါငျးတို့သတွေ့ကြုံခံစား တူညီသောရလာဒ်များ - သူတို့ရဲ့ဆေးကုသမှုအခြေအနေများကိုလွှတ်။
ငါတဦးတည်း naysayer ဖော်ပြထားအဖြစ်အမှန်စင်စစ်ဖြေရှင်းကြည့်ဖို့သေးရှိသည်။ porn-သွေးဆောင် ED ၏တည်ရှိမှုဆွေးနွေးခုနှစ်, doubters မျှထပ်မံဒီအချက်ထက် go:
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သူအခြို့ယောက်ျားတွေ ED ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် - ဒါကြောင့် - "ဆက်စပ်မှုတန်းတူမဟုတ် causation ပါဘူး။ "
အားလုံးဘာသာရပ်များအဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေ porn မှစိုက်ထူရတဲ့နှင့်အတူနှစ်ပေါင်း porn ကို အသုံးပြု. ခဲ့သညျ။
အနည်းငယ်သူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုပတျဝနျးကငျြမဆိုကိုယ်ကျင့်တရားသို့မဟုတ်ဘာသာရေး misgivings သတင်းပို့, ဒါမှမဟုတ်အပြစ်ရှိတယ်။
မကြာခဏအနှစ်သင်တန်းကျော် - ဘာသာရပ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုတစ်တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာခဲ့ရတယျ။
ဘာသာရပ်များညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးစိုက်ထူမှီနိုင်ဘူး, ဒါပေမယ့်အများကြီး porn နှင့်အတူနိုင်။
အတော်များများကဘာသာရပ်များဆေးပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမြင်ဘူးများနှင့်အမျိုးမျိုးသောကုထုံးသို့မဟုတ် regimen ကြိုးစားခဲ့ဖူး - အဘယ်သူမျှမအောင်မြင်မှုနှင့်အတူ။
သူတို့ကြားနေသည့်အခါအားလုံးနီးပါးဘာသာရပ်များအလားတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေတွေ့ကြုံ - အရာများစွာကိုတစ်ခုစွဲကနေဆုတ်ခွာတု။
အဆိုပါအချက်များပေါ်တွင်မူတည်: အားလုံးဘုံထဲမှာတစ်ဦးတည်းသာ variable ကိုခဲ့ရသည်။ ကြောင်းတစ်ခုတည်း variable ကို (porn မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ) ကိုဖယ်ရှားလိုက်သောအခါ - အားလုံးနီးပါး erectile ကျန်းမာရေးလာတယ်။ (သူတို့ erectile ကျန်းမာရေးနှင့်လိင်စိတ်ပြန်လည်မပြုခဲ့ပါလျှင်, သူတို့ရဲ့ပညာရေးများ၏အကြောင်းရင်းဖွယ်ရှိ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ခဲ့။ )
recover နှင့် erectile ကျန်းမာရေးပြန်လည်ပြီးတော့ပုံမှန် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမှပြန်လာသောသူဘာသာရပ်များနောက်ဆုံးမှာတစ်ဖန် causation သရုပ်ပြ, ED တစ်ပြန်လာသတင်းပို့ပါ။
[မှတ်ချက်အောက်ပါလေ့လာမှုများကိုလည်းဤနေရာတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်: porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက်လေ့လာရေး]
ပထမဦးဆုံးအ7လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေအဖြစ်:
တစ်ချိန်ကအမျိုးသားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုရှင်းပြခဲ့သည့်ရိုးရာအကြောင်းရင်းများသည် Erectile dysfunction မြင့်တက်လာခြင်း၊ သုတ်ရည်လွှတ်မှုနှောင့်နှေးခြင်း၊ လိင်ကျေနပ်မှုလျော့နည်းလာခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၌လိင်ဆက်ဆံစဉ်လိင်စိတ်နိုးထစဉ်ကာလအတွင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းအားလျော့ကျစေခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသုံးသပ်ချက် (၁) သည် domains များမှအချက်အလက်များကိုစဉ်းစားသည်။ , လက်တွေ့, ဇီဝဗေဒ (စွဲ / urology), စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်), လူမှုဗေဒ; နှင့် (40) ဤဖြစ်စဉ်၏အနာဂတ်သုတေသနများအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေ ဦး တည်ချက်အဆိုပြုထား၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူအားလုံးအစီရင်ခံစာများ, စီးရီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။
ဦး နှောက်၏စိတ်ခွန်အားနိုးစေသောစနစ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကိုအခြေခံသည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော etiology တစ်ခုအဖြစ်စူးစမ်းသည်။ ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်အင်တာနက်အပြာစာပေရုပ်ပုံ၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများ (အကန့်အသတ်မရှိအသစ်အဆန်း၊ ပိုမိုအစွန်းရောက်သောပစ္စည်းများသို့အလွယ်တကူတိုးချဲ့ရန်အလားအလာ၊ ဗွီဒီယိုဖိုင်စသဖြင့်) သည်အစစ်အမှန်သို့အလွယ်တကူမကူးပြောင်းနိုင်သောအင်တာနက်အပြာစာပေများအသုံးပြုမှုကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွစေရန်လုံလောက်သောအစွမ်းရှိသည် လိုချင်သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုသည်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်းနှင့်နှိုးဆွမှုလျော့ကျခြင်းများကဲ့သို့မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုနိုင်သော၊
လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရပ်စဲဘာသာရပ်များတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ variable ကိုဖယ်ရှားပစ်ရှိသည်သောနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. ကျယ်ပြန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဘို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှု reverse မှတစ်ခါတစ်ရံတွင်လုံလောက်သောကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
2) အထီးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (2016) - လက်ရှိဥက္ကiat္ဌဖြစ်သောပြင်သစ်စိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည် Sexology ၏ဥရောပအဖွဲ့ချုပ်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြားကပြန်နှင့်ထွက်သည့်စိတ္တဇဆိုင်းနေစဉ်, ဒါကြောင့်သူကအများအားဖြင့်ရည်ညွှန်းရဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့် porn-သွေးဆောင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် anorgasmia) ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ် anorgasmia နှင့်သူတို့ကိုကူညီဖို့သူ၏ကုထုံးချဉ်းကပ်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီးသူကို 35 လူတို့နှင့်အတူသူ၏စာတမ်းသည်သူ၏လက်တွေ့အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံသည်။
စာရေးသူကသူ၏လူနာအများစုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသုံးခဲ့ကြပြီး၊ အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ပြpornနာများ၏အဓိကအကြောင်းရင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည် (တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကနာတာရှည် ED ကိုဖြစ်ပေါ်စေတာမဟုတ်ဘဲ၎င်းကို ED ၏အကြောင်းတရားအဖြစ်ဘယ်တော့မှမပေးကြောင်းသတိရပါ) ။ အမျိုးသား ၃၅ ယောက်အနက် ၁၉ ယောက်ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာသိသိသာသာတိုးတက်လာတာတွေ့ရတယ်။ ကျန်တဲ့အမျိုးသားတွေကတော့ဆေးကုသမှုကိုမခံတော့ဘဲပြန်နေဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
အဆိုပါရောဂါဖြစ်ပွားမှု Croydon တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ, လန်ဒန်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအတွင်းငါ၏အမှုကနေယူပေါင်းစပ်ဖြစ်ပွားမှုများမှာ။ (အဆုံးစွန်သောအမှုနှင့်အတူလူနာ B), ကတင်ဆက်မှုအလားတူရောဂါနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ထှထှေကေုအားဖြင့်ရည်ညွှန်းခဲ့ကြသူငယ်ရွယ်ယောက်ျားတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုထင်ဟပ်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ လူနာ B ကို သူထိုးဖောက်မှုမှတဆင့် ejaculate နိုင်ခြင်းကြောင့်တင်ဆက်သူတစ်ဦး 19 နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပါသည်။ သူ 13 ခဲ့သောအခါသူမှန်မှန်အင်တာနက်ရှာဖွေမှုများကိုမှတဆင့်မိမိပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သူ၏အဆွေခင်ပွန်းသူ့ကိုစေလွှတ်သောလင့်များမှတဆင့်ဖြစ်စေညစ်ညမ်းဆိုဒ်များအားဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူက image ကိုသူ့ဖုန်းကိုရှာဖွေနေစဉ်ညတိုင်း masturbating စတင် ... သူအိပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ masturbate မပြုခဲ့ပါ။
ခက်ခဲပစ္စည်း (တရားမဝင်ဘာမျှ) သို့, (Hudson-Allez, 2010 ကိုကြည့်ပါ) ကိုမကြာခဏကိစ္စဖြစ်သကဲ့သို့သူကို အသုံးပြု. ခဲ့ညစ်ညမ်း, ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ခဲ့ ...လူနာ B ကို 12 ၏အသက်အရွယ်ကနေညစ်ညမ်းနေတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာပုံရိပ်နှင့်ထိတွေ့ခဲ့သူကို အသုံးပြု. ခဲ့ညစ်ညမ်း 15 များ၏အသက်အရွယ်အားဖြင့်ကျွန်ခံခြင်းနှင့်လွှမ်းမိုးဖို့ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ခဲ့သည်။
တွေ့ရှိချက်များကိုအင်တာဗျူး ၁၁ ခုနှင့်ဗွီဒီယိုဒိုင်ယာရီနှစ်ခုနှင့်စာသားဒိုင်ယာရီသုံးခုအပေါ်အခြေခံသည်။ အမျိုးသားများသည်အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၅၂ နှစ်အတွင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်း (များသောအားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်) ကိုနေ့စဉ်စားသုံးခြင်းဖြင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ (ဥပမာအားဖြင့်အကြမ်းဖက်မှုဒြပ်စင်များပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာ) ကိုနှိုးဆွမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်အထိသတင်းပို့သည်။ လိင်မှုနှိုးဆွမှုသည်အလွန်အမင်းမြန်ဆန်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်သီးသန့်ဆက်စပ်မှုရှိခြင်းအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနှင့်စိတ် ၀ င်စားမှုမရှိသောအခါအရေးပါသောအဆင့်သို့ရောက်ရှိသည်။
ဒါကလူတို့သညျညစ်ညမ်းတက်ပေးခြင်း,a"ကို re-Boot တက်" လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်စတင်ပေးသောအမှတ်တစ်ဦးကို real-ဘဝလက်တွဲဖော်နဲ့စိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တစ်ခုနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအတွက်ရလဒ်များ။ ဒါကတစ်ခုစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုပြန်လည်ဖို့ယောက်ျားအချို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။
အစည်းအဝေးအတော်များများတွင်သူသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုသူအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့သည်။ သူသည်အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ်များကတည်းကပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, မိမိအသုံးပြုမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအသေးစိတ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့လိင်နှိုးဆွဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များပြန်ခေါ်တခုတခုအပေါ်မှာတိုးပွားလာမှီခို၏ရှင်းလင်းသောဖော်ပြချက်ပါဝင်သည်။ သူလည်းသူကလိင်စိတ်နိုးထ၏ကြိုတင်, တပ်မက်လိုချင်သောအဆင့်ကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်သည့်အတူအသစ်သောပစ္စည်းတစ်ခုရှာဖှေနေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည့်အချိန်ကာလတစ်ခုအထိအပြီးမဆိုအထူးသဖြင့်ပစ္စည်းများ၏နှိုးဆွသောသက်ရောက်မှုတစ်ခု "သည်းခံစိတ်" ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖော်ပြခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများပျံ့နှံ့မှုနှင့်သုံးစွဲမှုများပြားလာခြင်းက Althof ၏ဒုတိယနှင့်တတိယသီအိုရီနှင့်ဆက်နွှယ်သော DE အကြောင်းတရားများကိုတိုးပွားစေသည်။ လူ ဦး ရေ၏ ၁၄.၄% သည်အသက် ၁၃ နှစ်နှင့် ၅.၂% ကြားရှိညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုခြင်းမတိုင်မီ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၏အစီရင်ခံစာများအရယောက်ျားလေး ၁၄.၄% သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြရသည် ။2008 ၂၀၁၆ ခုနှစ်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ၎င်းတန်ဖိုးများသည် ၄၈.၇% နှင့် ၁၃.၂% အသီးသီးအထိတိုးပွားလာခဲ့သည်။ 14.4 အစောပိုင်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည် DE ကို CSB ကိုပြသသောလူနာများနှင့်ဆက်ဆံရေးမှတစ်ဆင့်အထောက်အကူပြုသည်။ Voon et al ။ CSB ရှိလူငယ်များသည်၎င်းတို့၏အသက်အရွယ်ထိန်းချုပ်သည့်ရွယ်တူချင်းများထက်လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြကြောင်းတွေ့ရှိရသည်
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း CSB ရှိလူငယ်များသည် Althof ၏တတိယမြောက် DE သီအိုရီကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဆက်ဆံရေးတွင်နှိုးဆွမှုမရှိခြင်းကြောင့်မိတ်ဖက်လိင်များအပေါ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကို ဦး စားပေးရွေးချယ်နိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသည့်အမျိုးသားအရေအတွက်သည် Althof ၏တတိယသီအိုရီမှတစ်ဆင့် DE ကိုအထောက်အကူပြုသည်။ အထီးကောလိပ်ကျောင်းသား ၄၈၇ ယောက်ရဲ့လေ့လာမှုမှာ Sun et al ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ဘဝမိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးသောအပြုအမူများလျော့ကျသွားခြင်းကိုကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်ခံစားမှုအကြားဆက်စပ်မှုများတွေ့ရှိရသည်.487 Park et al မှဖြစ်ရပ်များအရဤတစ် ဦး ချင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုများမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရွေးချယ်ခြင်း၏မြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိသည် ။ အသက် (၂၀) ​​အရွယ်ရှိယောက်ျားလေးတစ် ဦး သည်ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လကသူ၏စေ့စပ်ထားသူနှင့်အော်ဂဇင်ရရန်အခက်အခဲရှိခဲ့သည်။
အသေးစိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာဇ ၀ င်ကဖော်ပြသည်မှာလူနာသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုပြီးလိင်အင်္ဂါကိုအသုံးချပြီးလိင်အင်္ဂါမှတစ်ဆင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေရန်လိင်အင်္ဂါကိုအသုံးပြုသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအော်ဂဇင်အတွက်ဂရပ်ဖစ်ပုံသဏ္orာန်နှင့်သရုပ်သဏ္natureာန်တူသောသဘောသဘာဝကိုလိုအပ်လာခဲ့သည်။ သူသည်သူ၏စေ့စပ်မှုကိုဆွဲဆောင်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပိုမိုလှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့်သူသည်ကစားစရာ၏ခံစားချက်ကိုပိုနှစ်သက်ကြောင်းပြခဲ့သည် ။77 အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုနိုင်မှုတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်လူငယ်များသည် Althof ၏ဒုတိယသီအိုရီအရ DE ကိုတီထွင်ရန်အန္တရာယ်ရှိသည် အောက်ပါဖြစ်ရပ်အစီရင်ခံစာ: Bronner et al ။ သူမသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲဆောင်မှုရှိသော်လည်းသူ၏ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်မရှိကြောင်းတိုင်ကြားမှုများကိုတင်ပြသည့်အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်ကျန်းမာသန်စွမ်းသူတစ် ဦး ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ အသေးစိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာဇ ၀ င်ကဒီအဖြစ်အပျက်ဟာသူချိန်းတွေ့ရန်ကြိုးစားခဲ့သည့်လွန်ခဲ့သောအမျိုးသမီး ၂၀ နှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
သူသည်အစပိုင်းတွင် zoophilia၊ အချုပ်အနှောင်၊ sadism နှင့် masochism တို့ပါဝင်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်လိင်၊ လိင်နှင့်လိင်ဆိုင်ရာလိင်များသို့တိုးတက်လာခဲ့သည်။ သူသည်သူမစိတ်ကူးထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမိန်းမများနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်မြင်ယောင်လိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲတဖြည်းဖြည်းရပ်သွားသည် ။74 လူနာ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အစစ်အမှန်ဘဝများအကြားကွာဟချက်သည်ကြီးမားလွန်းသဖြင့်အလိုဆန္ဒများဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ Althof ၏အဆိုအရ၎င်းသည်အချို့သောလူနာများတွင် DE အဖြစ်ဖော်ပြလိမ့်မည်ဖြစ်သည် ။73 ပန်းချီတွင်အော်ဂဇင်ကိုပိုမိုဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ် fetish သဘောသဘာဝအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည့်ဤထပ်တလဲလဲသောအကြောင်းအရာကို Park et al ကသတ်မှတ်သည်။ အဖြစ် hyperactivity။ လူတညစ်ညမ်းအားမိမိလိင်စိတ်နိုးထ sensitizes အမျှအမှန်တကယ်အသက်တာ၌လိင်မရှိတော့ ejaculate (သို့မဟုတ် ED ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်စိုက်ထူထုတ်လုပ်ရန်) အားလျော်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းမြှင့်လုပ်ဆောင် .77
DSM-IV-TR အနေဖြင့်အချို့သောအပြုအမူများကိုလောင်းကစားခြင်း၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများအသုံးပြုခြင်းစသည့် hedonic အရည်အသွေးများနှင့်အချို့သောအပြုအမူများကိုသတ်မှတ်ထားသောအရာများ၌ဖော်ပြလေ့မရှိသော်လည်း ၄ င်းတို့ကိုအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုများအဖြစ်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ] ။ မကြာသေးမီကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများတွင်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု၏အခန်းကဏ္suggestedကိုအကြံပြုထားသည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုတွင်ပါဝင်သည့် neurobiological လမ်းကြောင်းများပြောင်းလဲခြင်းသည်ဇစ်မြစ်အမျိုးမျိုး၏ထပ်ခါထပ်ခါပုံမှန်မဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှုများ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်သည်။
သူတို့တစ်တွေနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်တွင်သို့မဟုတ်နီးပါးနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာညစ်ညမ်းလောင်ဆိုလိုသည်မှာ 16 မှ 29 အသက်ယောက်ျား၏လေးဆယ်တစ်ရာခိုင်နှုန်း, ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုသူများကိုဖြစ်ကြသည်။ အမြိုးသမီးမြားအကြားသက်ဆိုင်ရာရာခိုင်နှုန်းကို3ရာခိုင်နှုန်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုကိုလည်းမကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ကိုပြသ အရောင်းအဝယ်လိင်နှင့်တစ်ဦးပေါင်းသင်းမှု, သိပ်မြင့်မားသောတဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်တဦးတည်းရဲ့လိင်ဘဝနှင့်အတူမကျေနပ်မှု.
လူ ဦး ရေ၏ထက်ဝက်နီးပါးကသူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုသည်သူတို့၏လိင်ဘဝအပေါ်မသက်ရောက်ပါဟုဖော်ပြသည် အဲဒါကိုသာသက်ရောက်သည်သို့မဟုတ်မပါလျှင်တတိယအနေဖြင့်မသိရပါဘူး။ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းဟာသူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဟာသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဟုဆိုသည်။ ဒါဟာပုံမှန်နိမ့်ပညာရေးနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်အတူလူတို့တွင်ပိုပြီးအဖြစ်များခဲ့ပါတယ်။
ပက်ဒရိုသည်အပျိုကညာအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ သူသည်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်အတိတ်ကကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ကြုံခဲ့ရသည့်အရှက်ကွဲခြင်းခံစားချက်များကိုပြောဆိုခဲ့သည်။ သူ၏မကြာသေးမီကလိင်မှုဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုသည်သူ၏ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကသူ့ကိုစိုက်ထူခြင်းမှတားဆီးသည့်အခါအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သူကသူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ခြင်းဖြင့်စွပ်စွဲခဲ့သည်။
ပါပလောသည်သူ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အနည်းငယ်သာရှိသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ သူသည်တစ်နေ့လျှင်နာရီပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုတက်ကြွစွာပါဝင်နေစဉ်သို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုပြုလုပ်နေစဉ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုတွင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်တစ်နေ့လျှင်နာရီပေါင်းများစွာပါဝင်ခဲ့သည်။ ပါပလောသည်သူကြုံတွေ့နေရသည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိသောဆရာဝန်ထံသွားခဲ့သည်။ သူသည်သူ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများကိုသူ၏ဆရာဝန်အားထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သော်လည်းပါပလောအားသူမအားမွေးဖွားခြင်းဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်အဖြစ်ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။
ပါပလောသည် testosterone ဟော်မုန်းကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည်အကျိုးမရှိဟုအစီရင်ခံခဲ့သည် သို့မဟုတ်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုမှအသုံးဝင်မှုကို၎င်း, အနုတ်လက္ခဏာအတွေ့အကြုံကိုမိမိအညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူမည်သည့်နောက်ထပ်အကူအညီတောင်းထွက်ရောက်ရှိရာမှသူ့ကိုတားဆီး။ pre-လေ့လာမှုအင်တာဗျူးပါပလော, မိမိညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းဘယ်သူ့ကိုမှနှင့်အတူပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးစကားပွောနိုင်ခဲ့သည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည် ...
38) လာမည့်လေ့လာမှုများဖော်ပြဟောပြောခြင်း - Urology ပါမောက္ခ Carlo Foresta, မျိုးဆက်ပွား Pathophysiology ၏အီတလီ Society ၏ဥက္ကဋ္ဌတို့က - အဆိုပါဟောပြောပွဲ longitudinal နှင့် Cross- အပိုင်းလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုပါရှိသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်အထက်တန်းကျောင်းဆယ်ကျော်သက်များ (စာမျက်နှာ ၅၂-၅၃) ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ လေ့လာမှုက ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမပြည့်ဝမှုသည်နှစ်ဆတိုးတက်ခဲ့ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမှာ ၆၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။
39) (ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမရှိပါ) ဤတွင်ပါ MedHelp အပေါ် posted မှတ်ချက်များနှင့်မေးခွန်းများကိုတစ်ခုကျယ်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြောင်းကိုဆောင်းပါး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုရည်မှတ်။ အဘယ်အရာကိုထိတ်လန်ရဲ့အကူအညီတောငျးလူ 58% 24 သို့မဟုတ်အငယ်ခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အတော်များများကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်မသင်္ကာ လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကိုမှာဖော်ပြထားတဲ့ -